Akụkọ - Ihe omuma nke iko
Glass Ugboro abụọ Edging Machine
Glass Kwụ Ọtọ Line Edging Machine
Glass Ọdịdị Edging Machine
Isi ihe omuma nke iko
Banyere echiche nke iko
A na-akpọ iko, Liuli na China oge ochie. Ejiri iko gosipụta ihe odide Japanese nke Japanese. Ọ bụ ihe siri ike nghọta nke na-etolite usoro ntanetị na-aga n'ihu mgbe agbaze. N'oge obi jụrụ, viscosity ahụ na-eji nwayọ nwayọ ma sie ike na-enweghị mkpuchi. Ihe mejupụtara nke nkịtị iko chemical oxide bụ Na2O • CaO • 6SiO2, na isi mejupụtara bụ sịlịkọn dioxide.
Iko anaghị arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị ma anaghị eso anụ ahụ arụ ọrụ, ya mere ọ dị ọtụtụ. Iko bụ ihe anaghị agbasa na acid (ewepu: hydrofluoric acid na-eme ka iko jiri ya mepụta SiF4, nke na-eduga na nsị iko), mana enwere ike ịgbanye ya na alkalis siri ike, dị ka cesium hydroxide. Usoro n'ichepụta ihe bụ iji gbazee ọtụtụ ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị ma mee ngwa ngwa jụọ ha oyi. Mkpụrụ ndụ ọ bụla enweghị oge zuru ezu iji mepụta kristal iji mepụta iko. Iko bụ ihe siri ike na ụlọ okpomọkụ. Ọ bụ ihe na-emebi emebi na ike nke Mohs nke 6.5.
Akụkọ ihe mere eme nke iko
E nwetara enyo site na nkwenye nke mmiri acid si na ugwu mgbawa pụta. Tupu 3700 BC, ndị Ijipt oge ochie nwere ike ịme ọla na ịchọ mma dị mfe. N'oge ahụ enwere naanị iko. Tupu 1000 BC, China rụpụtara iko na-enweghị ntụpọ.
Na narị afọ nke 12 AD, iko azụmahịa maka mgbanwe gbanwere wee malite ịmịpụta ihe eji arụ ọrụ. Na narị afọ nke 18, iji gboo mkpa nke telescopes na-emepe emepe, e mepụtara iko anya. N'afọ 1873, Belgium butere ụzọ n'ichepụta iko dị larịị. N’afọ 1906, United States mepụtara igwe eji eme ugegbe larịị. Na 1959, British Pilkington Glass Company mara ọkwa nye ụwa na ise n'elu-akpụ usoro maka ewepụghị iko na-ọma mepụtara, nke bụ mgbanwe na mbụ grooved akpụ usoro. Kemgbe ahụ, site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na imepụta nnukwu iko, iko eji eme ihe dị iche iche na akụrụngwa dị iche iche apụtala otu n'otu. N'oge a, iko aghọwo otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ndụ kwa ụbọchị, mmepụta, na sayensị na teknụzụ.
Post oge: Feb-21-2021
Adreesị:No.20-8 nke Lunjiao International Wooden Machinery Exhibition, Lunjiao Town, Shunde District City, Guangdong Province, China.